सेवा - माइक Optoelectronic कं, लिमिटेड
श्रृंखला एलईडी बी सडक प्रकाश
एक शृंखला नेतृत्व बाढी प्रकाश
एस श्रृंखला बाढी प्रकाश नेतृत्व
एम शृंखला बाढी प्रकाश नेतृत्व
एलईडी लागि के खडा गर्छ?
नेतृत्व प्रकाश-उत्सर्जक डायोड लागि छोटो छ।
एल ई डी कसरी लामो पछिल्लो गर्छन्?
एल ई डी अत्यन्तै चिरकालीन उत्पादनहरु भएकोमा उल्लेखनीय छन्। धेरै एल ई डी अप 50,000 गर्न घन्टा को दर्जा दिइएको जीवन छ। यो लगभग 50 पटक अब एक विशिष्ट गरमागरम भन्दा, एक विशिष्ट हलोजन भन्दा 20-25 पटक अब, र 8-10 पटक अब एक विशिष्ट सीएफएल भन्दा छ। प्रयोग एक दिन 12 घण्टा, एक 50,000 बल्ब 11 भन्दा बढी वर्ष पछिल्लो हुनेछ। एक दिन 8 घण्टा प्रयोग, यो 17 वर्ष पछिल्लो हुनेछ!
एल ई डी कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ?
उनि लगभग कहीं पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एलईडी प्रतिस्थापन पहिले नै यस्तो-आकार रूपमा बल्ब प्रकार, बराबर reflectors, एमआर reflectors, सजावटी, undercabinet, र थप लागि उपलब्ध छन्। dimmers प्रयोग गर्दा धेरै बल्ब समर्थन गर्ने विशेष मधुरो प्रणाली, हामी केही एल ई डी पहिलो अनुकूलता परीक्षण गर्न परीक्षण सुझाव।
नेतृत्व स्विच को लाभ के हुन्?
नेतृत्व स्विच को लाभ धेरै छन्। , अत्यन्तै लामो मूल्याङ्कन जीवन छ, यूवी वा इन्फ्रारेड फेंकना छैन, धेरै सानो गर्मी उत्पादन कुनै पारा समावेश तर्साउन र कम्पन गर्न प्रतिरोधी हो, र प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सक्छन्, एल ई डी अन्य बल्ब भन्दा धेरै कम बिजुली प्रयोग: यहाँ केही फाइदाहरू मात्र हो अत्यन्तै चिसो वातावरणमा। थप जानकारीको लागि नेतृत्व को लाभ,
किन एल ई डी बल्ब को अन्य प्रकार भन्दा बढी खर्च गर्छन्? तिनीहरूले यो मूल्य हुनुहुन्छ?
नेतृत्व अझै पनि नयाँ प्रविधि हो, र गुणस्तर उत्पादन उत्पादन को खर्च अझै पनि उच्च छ। तर, मूल्य निर्धारण केही वर्ष पहिले देखि नाटकीय तल आएको छ र मूल्यहरू ड्रप जारी आशा गरिन्छ। एल ई डी अतिरिक्त लागत लायक कि को मामला मा, यो अप-सामने लागत बाहेक एक बल्ब सञ्चालन गर्न लागत मा हेर्न उपयोगी छ। नेतृत्व गर्न स्विच मा बुझे ऊर्जा बचत मतलब अतिरिक्त माथि-सामने लागत अक्सर फिर्ता बरु चाँडै भुक्तानी छ, र तपाईं बल्ब को जीवन भन्दा पैसा बचत अप हावा छौँ। यहाँ एउटा उदाहरण छ: प्रति हप्ता बस 10 घण्टा मा प्रकाश हुन सक्छ जो एक आवासीय ग्राहक लागि ñ को payback 10 वर्ष भन्दा बढी छ। अर्कोतर्फ, एक खुद्रा वा रेस्टुरेन्ट ग्राहकको प्रति हप्ता 90-100 घण्टा बत्ती जल छ जो एक $ 70 18 भन्दा कम महिना हुन PAR नेतृत्व मा आफ्नो payback गणना हुनेछ। निर्णय गर्दा नेतृत्व लागि सही छ भने आफ्नो payback अनुमान मा एक नजर लिएर निश्चित एक विचार हुनुपर्छ।
त्यहाँ साँच्चै $ 10 एलईडी र एक $ 50 एलईडी बीच कुनै पनि फरक छ?
हो। एल ई डी उपभोक्ता इलेक्ट्रनिक्स धेरै समान छन् र गुणस्तर साँच्चै मामलाहरु। ठीक स्वीकार्य प्रकाश उत्पादन कार्य र प्रदान गर्न एक एलईडी लागि क्रममा, घटक सबै पछिल्लो निर्मित हुनुपर्छ। यसलाई सधैँ ढुक्क उत्पादन पछि खडा हुनेछ हुनुहुन्छ भनेर एक निर्माता र खुद्रा विक्रेता देखि किन्न एक राम्रो विचार छ। तपाईं cheaply बनाएको एल ई डी स्ट्याग अप शीर्ष गुणस्तरीय उत्पादन विरुद्ध घटक र कसरी बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने,
एक एलईडी मेरो वर्तमान बल्ब प्रतिस्थापन गर्न पर्याप्त प्रकाश उत्पादन जाँदै छ?
सबैभन्दा आवेदन, हाँ। बन्द-द-तखता एलईडी उत्पादनहरू मजबूती अप गर्न 100 वाट को गरमागरम समकक्ष प्रतिस्थापन गर्दै छन्, र विशेषता उत्पादनहरु पनि उच्च wattages प्रतिस्थापन गर्न उपलब्ध छन्।
नेतृत्व प्रकाश गुणस्तर के हो?
तपाईं गुणस्तर उत्पादन किन्न भने, प्रकाश गुणस्तर उत्कृष्ट छ। रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) साधारण 1-100 देखि एक मात्रा मा प्रकाश गुणस्तर मापन गर्न प्रयोग गरिएको छ। सबैभन्दा एल ई डी कम्तिमा 80 को एक CRI दर्जा, र धेरै माथि 90 रेटेड छन् र।
एल ई डी कसरी हरियो छन्?
एल ई डी धेरै हरियो छन्। स्टार्टर्स लागि, तिनीहरूले धेरै अन्य प्रकाश उत्पादनहरु भन्दा धेरै कम बिजुली प्रयोग गर्नुहोस्। यो कम बिजुली तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्न उत्पादन गर्न सकिन्छ, र शक्ति बिरुवाबाट कम उत्सर्जन परिणामस्वरूप, विशेष गरी कोइला-निकाल बिरुवाहरु साधारण हो जहाँ क्षेत्रमा छ भन्ने हो। सीएफएल विपरीत, तिनीहरूले कुनै पारा समावेश गर्दछ। तपाईं टाढा हालियो हुनबाट पचास 1,000 घण्टा गरमागरम बल्ब रोक्न तपाईंलाई एउटा नेतृत्व एउटा गरमागरम बल्ब प्रतिस्थापन भने: किनभने आफ्नो लामो जीवन को, तिनीहरूले पनि ठोस फोहोर कम। यसबाहेक, तिनीहरूले धेरै सानो गर्मी उत्पादन र एचभिएसि सम्बन्धित ऊर्जा उपयोग कम गर्न सक्छ। ऊर्जा अमेरिकी विभाग अर्को 15 वर्ष भन्दा बढी एल ई डी को ग्रहण वृद्धि पनि 62 प्रतिशतले प्रकाश देखि बिजुली माग कम थियो कार्बन उत्सर्जन को 258 लाख मेट्रिक टन रोक्न, र 133 नयाँ शक्ति बिरुवाहरु लागि आवश्यकता खत्म अनुमानित छ।
एल ई डी dimmers संग प्रयोग गर्न सकिन्छ?
सामान्यतया, हाँ। धेरै एल ई डी विशेष dimmable रूपमा सूचीबद्ध छन्। केही मधुरो प्रणाली अरूलाई भन्दा राम्रो एल ई डी काम, त्यसैले यसलाई एक वा दुई पूर्ण पुन: lamping अघि ठाउँ परीक्षण गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
एल ई डी संलग्न जुडनार मा प्रयोग गर्नुपर्छ?
तिनीहरूले पूरा तरिकाले संलग्न यदि छैन। एक नेतृत्व सही काम गर्नको लागि क्रममा तिनीहरूले Allo एक गैर-संलग्न दृढता हुनुपर्छ